Hery amin'ny andro fahoriana
"Ary amin'izany andro izany dia hitsangana Mikaela, andrian-dehibe, izay mitsangana hiaro ny zanaky ny firenenao; ary hisy andro fahoriana, izay tsy nisy tahaka azy hatrizay nisian'ny firenena ka hatramin'izany andro izany; ary amin'izany dia ho afaka ny firenenao, dia izay rehetra hita voasoratra ao amin'ny boky" - Dan. 12:1.
Raha manakaiky ny fotoan'ny adiny farany, ilay "andro fahoriana ho an'i Jakoba" ireo mambran'ny tenan'i Kristy, dia hitombo ao amin'i Kristy ka hiombona tanteraka amin'ny toe-tsainy izy ireo. Raha hanakoako amin'ny feo mahery ny hafatry ny anjely fahatelo, ary raha hisy hery sy voninahitra lehibe homba ny fiafaran'ny asa, dia hiombona amin'izany voninahitra izany koa ireo vahoakan' Andriamanitra mahatoky. Ny fara orana no mamelombelona sy mampahatanjaka azy ireo hiatrika ny andro fahoriana. Hamirapiratra ny voninahitry ny fahazavana izay momba ilay anjely fahatelo ny tavan'izy ireo.
Hitako fa hiaro ny vahoakany amin'ny fomba mahagaga Andriamanitra amin'ny andro fahoriana. Tahaka ny namborahan'i Jesôsy ny fanahiny tao amin'ny ady nihatra aman'aina tao amin'ny sahan'i Getsemane, dia hitalaho sy hitolona mafy andro aman'alina ho amin'ny fanafahana koa izy ireo. Hivoaka ny didy mibaiko azy ireo handika ny Sabatan'ny didy fahefatra, fa hankamasina kosa ny andro voalohany amin'ny herinandro, raha tsy izany dia hahavery ny ainy izy. Tsy hilefitra anefa izy ireo, ka tsy hanitsakitsaka ny Sabatan'ny Tompo ary tsy hanamasina ny rafitra papaly. Hanodidina azy ireo ny anjelin'i Satana sy ny ratsy fanahy, ary hifaly satria toa tsy misy lalana handosiran'izy ireo intsony. Kanefa ao anatin'izany fifaliam-pandresen'ny tarik'i Satana izany no injany re manakoako sy mirefodrefotra ny kotro-baratra mafy dia mafy. Nihanivalomainty ny lanitra, ka tsy misy manazava azy afa-tsy ny fahazavan'ny tselatra sy ny voninahitra avy any an-danitra, raha mamoaka ny feony avy ao amin'ny Fitoerany Masina Andriamanitra.
Mihovitrovitra ny fanorenan'ny tany, mihozongozona ny trano lehibe ary mianjera amin'ny fiantontany mahatsiravina. Mangotrakotraka toy ny rano ampangotrahina amin'ny vilany ny ranomasina, ary mihovitrovitra ny tany manontolo. Miova ny fahababoana manjo ny marina, ary mifampilaza amin'ny bitsibitsika mamy sady feno fahatokiana izy ireo manao hoe: "Afaka isika. Ny feon'Andriamanitra izany!" Mihaino amim-panajana feno ny teny avoakan'ilay feo izy ireo. — TFC 1:353,354.